Uyisebenzisa kanjani i-Lathe yensimbi: Isikhewu sokuSebenza somatshini wokulala ngomatshini-i-TSINFA
indlela yokusebenzisa i-lathe yesinyithi: umsantsa webhedi womatshini womatshini osebenza ngomatshini
Umsebenzi wokuphatha ukuphatha umatshini weLathe
Indawo yokusebenza kwendalo iphelai-lathe yesinyithi:
Iqhosha eliphambili leemoto "lokuma okungxamisekileyo".
Isiphatho sokujija esitshintshayo. Zintathu iindawo ezisebenzayo zokuphakama kwesantya esiphezulu, esiphakathi kunye nesezantsi kunye nezikhundla ezibini zero ukukhupha idrive kwi-drive.
3 Iqhina elifakiweyo. Zimbini izikhundla "zasekunene" kunye "nesandla sasekhohlo". Xa intonga yokujikeleza ijikeleza phambili, isiphatho kufuneka sibekwindawo “yasekunene”. Xa isixhobo sokujija sibuyiselwe umva, isiphatho kufuneka sibekwindawo “yasekhohlo”, kungenjalo akukho kutya, kwaye umsonto awuxhomekekanga kwesi sithintelo.
4 Isibambo sokwandiswa kwenqaku. Kukho izikhundla ezibini ze "J (i-pitch eyisiseko)" kunye ne "K (i-pitch eyandisiweyo)".
5 Isiphatho sokujija esitshintshayo. Ngezikhundla ezisibhozo, izibambo ezi-2 nezingama-5, izantya zokujija ezingama-22 ziyafumaneka.
6 Impompo okupholisa ukutshintsha kwemoto.
7 Uhlobo lwesiphatho sokutshintsha isiphatho. Kukho i-metric (t) yasebukhosini (a) imodyuli (m) ubukhulu becandelo (p) i-bit-bit towering.
I-8 (A) kunye ne-9 (B) ziziphatho ezisisiseko zebhokisi yesondlo. Guqula umlinganiselo we-pitch we-pitch okanye we-feed, kwaye usebenzise izibambo ezisi-8 nezili-9 kunye.
10 Isibambo esiphindiweyo. Umthamo opheleleyo uyaphindaphindwa kwaye ukutya kuphindwe kabini kwizikhundla ezisibhozo.
11, 14 Ngaba yinto yokulinganisa. Sebenzisa isixhobo sokuphotha ukubuyisela umjikelo kwaye uyeke ujikelezo lokuluka.
12 Ibhokisi yezilayidi icofa.
13 Isibambo se nut sokuvula nokuvala. Ukusetyenziswa kokufaka umsonto.
15 Umsonto wesithende. I-tailstock yeselula iyasetyenziswa.
Isibambo sokubamba esikhawulezileyo esikhawulezileyo. Qhoboshela i-nut nge-tailstock. Xa umsila uphantsi komthwalo omkhulu, awusetyenziswa xa kusikwa.
Isiphatho sesondlo esinexesha elide kunye nesithe tyaba sesiphatho sesixhobo. Izikhombisi zokondla ezinde kunye nezisecaleni zesiphatho sesixhobo kunye nokuhamba phambili kunye nokubuyela umva kweefidi zonke ziyaqondwa ngesiphatho, kwaye intshukumo ekhawulezayo kwicala elinye ilawulwa ngamaqhosha esiphatho.
Isiphatho esincinci esincinci esincinci.
19 Eyona moto iphambili “yokumisa likaxakeka” iqhosha.
21 Eyona moto iphambili iqhosha "ukuqala".
22 Isiphatho sesikwere esiphethe isalathiso kunye nesiphatho sokubamba.
Isiphatho sesiphatho (isiphatho sesilayidi esiphakathi). Ukuhamba kwe-lateral manual (ujikeleze ngamawaka aphathwayo kwaye wandisiwe, lumka xa usebenzisa umatshini ukunqanda ukwenzakala).
I-24 Ibhokisi yesilayidi yewheel handwheel: Sebenzisa eli sandla xa uhambisa isiphatho sesixhobo ngokuthe nkqo.
Umhlathi oZimeleyo oziThoba u-Chuck
I-chuck yomhlathi wesithathu yokuzijonga ngokwakho sisixhobo esiqhelekileyo kwifayile yelathe injini, kunye nolwakhiwo kunye nokumila kubonisiwe kuMzobo.
Xa utsalo we-chuck ufakwa kumngxunya wesikwere we-pinion 2, i-gear enkulu ye-3 iyajikeleza. Isixhobo esikhulu sentsimbi 3 sinomsonto osicaba kwicala langasemva, kwaye umsonto osicaba ubotshelelwe ngomsonto kunye nobuso bokugqibela benzipho 4, ukuze iinzipho ezintathu zihanjiswe ngaxeshanye kwentshukumo ye-centripetal okanye ye-centrifugal. I-chucks ezisebenzisa i-metric yokuziqhelanisa neziqhelekileyo ziyafumaneka nge-150, 200, 250.
Qalisa kwaye umise i-Metal Lathe
1.Jonga ukuba ibhedi yeLathe ikwimeko echanekileyo. Oko kukuthi, isiphatho sokutshintshela isihlunu se-2 kufuneka sibekwindawo yokungathathi hlangothi (indawo eyi-0), izibambo ezisebenza nge-spindle 11, 14 kufuneka zikwindawo yokumisa, isiphatho sokuvula kunye nokuvala isibambo kufuneka sikwi "on" position, kwaye iimoto eziphambili "zokuma okungxamisekileyo" amaqhosha 1 no-20 akwi "Vula" Isimo (iqhosha liyavela). Emva kokuqinisekisa impazamo, vala iswitshi samandla esiphambili emva kwendawo eyomileyo, njengoko kubonisiwe kumzobo.
Lathe amandla ophambili
2. Cinezela iqhosha lokuqalisa eliluhlaza elingama-21 kwisali yokuqalisa imoto.
3. Jikelezisa isibambo sokutshintshela isihlunu esisi-2 ukuya kwisantya esikhethiweyo, phakamisa isibambo sokulawula othini se-11 okanye se-14 ukuya phezulu ukuze uqaphele ukujikeleza kokuphamba; embindini wesiphatho sokulawula uphakathi ukuqonda indawo yokuma yokuluka; isiphatho solawulo sisezantsi ukuze siqonde ukujika okujikelezayo.
4. Xa ulayisha kwaye ukothula indawo yokusebenza, utshintsha isixhobo, ulinganisa ubungakanani bento yokusebenza kwaye utshintsha isantya, cinezela iqhosha eliphambili leemoto "lokuma okungxamisekileyo" okanye indawo yokuqala engama-20.
5. Kwimeko yonxunguphalo, cofa iqhosha u "stop stop" lama-20 eemoto eziphambili ukumisa isixhobo sokuluka selitye.
6. Xa i-lathe imisiwe ixesha elide, isitshixo sombane esingundoqo kufuneka sicinyiwe.
Umsebenzi weSpindle Box Shifting Operation
Isixhobo sokujija esitshixwayo 2, 5 sinokusetyenziselwa ukunyenyisa isantya sokuluka ukusuka kwi-11 kuye kwi-1400 r / min.
Ukusebenza kweBhokisi yeSilayidi
Iwhewheelali yesandla esine-counter-clockwise yokujika ibhokisi yesilayidi 24, Jika ibhokisi yesilayidi ubude bewheelwheel ngewotshi 24, kwaye uhambise isali ngasekunene. Igridi nganye kucofo lwe-lathe yi-1 mm.
Ukusebenza kwesondlo seLongitudinal i-150 mm, emva koko kwarhoxiswa ubude be-130 mm.
Umsebenzi b Buyisa i-20 mm ubude kwaye i-186 mm ubude bude.
2.Jika isixhobo esiphethe iwotshi (isiphatho sesilayidi esiphakathi) 23 ， Isiphatho sesixhobo sihambela kude kumqhubi (okt, kamva kwisixhobo); Ngaphandle koko, irhoxisiwe kamva.
Kwimithambo esekwe ebhodini, kufuneka ihambe ngesantya esicothayo, ifuna izandla zozibini ukuba zitshintshane kwaye zihambe ngokukhululekileyo, zahlule kwicala lokurhoxa nasekurhoxiseni, kwaye impendulo iyatshintsha kwaye intshukumo ichanekile.
Isitya esityeni si-0,5 mm.
Ukusebenza i Lungisa isikali isilayidi ukuya kwindawo zero kunye nokondla kwicala tye 2 m.
Umsebenzi b Lungisa isikali sesilayidi siye kuma-25 kunye nokubuyela okuthe tye ku-1mm.
3.Jika isiphatho esincinci esityibilikayo ngokwewashi ukuhambisa isilayida esincinci phambili; Guqula isiphatho esincinci esityibilikayo ujikeleze ngasekhohlo ukuhambisa isiphatho sesixhobo ngasemva.
Ukuzivocavoca isikali esincinci se-skateboard kufuna ukucotha kunye nokuhamba, kufuna ukuba zombini izandla zihambe ngokuhlukileyo.
Igridi nganye kwidayali encinci ye-skateboard iyi-0. 05 mm, kwaye iveki ziigridi ezili-100.
Imbalelwano phakathi kwesikali sobuso kunye nenani leeseli.
Ukusebenza a Lungisa isikali esincinci sesilayidi ukuya kwindawo ye-zero kwaye wondle ubude be-3 mm.
Umsebenzi b Lungisa isilayidi esincinci kubungakanani bama-42 kunye nobude obude obuya kwi-12.5 mm.
Ukusebenza kweBhokisi yokuKondla
Ngokokutya okuthe nkqo nangokuthe tye, misela indawo yewhewheel yesandla kunye nesiphatho kwibhokisi yokutya ulungelelanise. Umzekelo, ukuba i-longitudinal feed ikhethwe ukuba ibengu-0.307 mm / r, hlengisa isiphatho sohlobo lwentambo yokutshintsha i-7 kwimetriki (t), ibhokisi yesondlo, okanye isiphatho esingu-8 (A), 9 (B) ukuya ku-1 , izibambo eziphindwe kabini ukuya ku-3.
Ngokwentetho yomtya owenziwe ngomatshini, jonga igama lebhokisi yesondlo.
Ukuqhutywa kwesondlo ngeemoto
Hambisa isixhobo esiphethe ixesha elide kunye nendawo ethe tyaba yesiphatho se-18 ukuze icala laso lihambelane nolwalathiso lwe-feed longitudinal; ukuba ucinezela iqhosha lokuya phambili ngokukhawuleza kwisiphatho, isali iya kusiwa ixesha elide.
Xa isiphatho esingu-18 sitsaliwe saza sahluthwa, cofa iqhosha lokuya phambili ngokukhawuleza ukuhambisa isiphatho sesixhobo ngokukhawuleza nangelinye ixesha.
Ukusebenza kwesiPhathi sezixhobo
Guqula isalathiso sesiphatho sesikwere kunye nokubamba ukubamba ngokubhekisele kwewotshi 22, isiphatho sesixhobo sinokujikeleziswa ngasekhohlo ukutshintsha indawo yesixhobo sokujika; xa isiphatho esingu-22 sijikwe saya kwewotshi, isiphatho sesixhobo sitshixiwe.
Ukulungiswa kwemikhono ye-Tailstock
Njengoko kubonisiwe kumzobo, umkhono wokulungisa umkhono we-tailstock ungalungiswa ngewotshi ukulungisa umkhono we-tailstock kwindawo oyifunayo. Tsala umkhono wokulungisa umkhono we-tailstock nge-25 ukuya ngasekhohlo ukukhulula umsila
Emkhonweni Tailstock kwangaphambili kunye nomsebenzi ekuphumeni
Guqula iteyile yesandla yesitokhwe ngokuhamba kwewashi ukuya kwewotshi ukwenza umkhono wempuphu uphume; guqula i-tailstock i-counterclockwise, kwaye i-sleeve ye-tailstock ibuyele.
Indawo esisigxina yesitokhwe
Tsala isiphatho somsila esikhawulezileyo sokubamba umva nge-16 ngasemva (kude ne-opharetha), ukhulule isitokhwe, uhambise umsila ixesha elide ecaleni kwebhedi ukuya kwindawo oyifunayo, emva koko uhambise umsila phambili (kufutshane nomsebenzisi) Isihlalo sikhawulezisa isibambo khusela ngokukhawuleza umsila ebhedini.
Amanyathelo okususa u-Chuck wokuzimela
Amanyathelo kunye neendlela zokususa izinto ze-chuck ezijolise kuwe
(1) Zikhulule izikrufu ezintathu ezisetiweyo ukhuphe iigear ezintathu zewayini.
(2) Khulula izikhonkwane ezithathu zokubopha 7 Susa isiciko sothuli 5 kunye negiya enkulu yentsimbi 3 enemisonto ethe tyaba.
2. Indlela yokulayisha imihlathi emithathu
Xa i-chuck ifakiwe, isikwere sesitshixo se-chuck sifakwa kumngxunya wesikwere segiya yokujikeleza, kwaye umsonto weplanethi wejelo enkulu yentsimbi ujikelezisiwe. Xa isikrufu sentambo ethe tyaba sijikile ukuze sisondele kwindawo yokuhlala, umhlathi ongu-1 ulayishwe kwisithuba sezindlu. Imihlathi emibini eshiyekileyo ilayishwe ngokulandelelana kweNombolo 2 kunye no-3, kwaye indlela yokulayisha iyafana neyangaphambili.
I-3 chuck yokulayisha kunye nokothula umthambo kwisixhobo sokuluka
(1) Xa ufaka i-chuck, qala ucoce indawo yokuqhagamshela kunye ne-refuel ukuqinisekisa ukuchaneka kofakelo lwe-chuck.
(2) Emva kokuba i-chuck ijijelwe kwisixhobo sokuluka, inqwelomoya yesitshixo kunye neplanga yokuluka kufuneka iqhotyoshelwe ngokuqinileyo.
(3) Xa ukothula i-chuck, beka ukuphakama kwebhloko yomthi okhuni okanye igolide ethambileyo phakathi kweenzipho kwelinye icala lomqhubi kunye nomphezulu wesiporo sikaloliwe, emva koko ujike iinzipho kwindawo ethe tyaba ekufuphi kwaye ucothise kancinci ukungqubana . Xa i-chuck ikhululekile, kuya kufuneka umise imoto kwangoko kwaye usebenzise izandla zakho ukuthoba i-chuck.
(1) Xa kulayishwa ukothula ipleyiti ekruqulayo kwisixhobo sokuluka, faka intonga yentsimbi kumngxunya wokuluka uze udibanise unogada webhedi ukunqanda umonakalo kumphezulu webhedi.
(2) Xa ufaka iinzipho ezintathu, qhubeka kwicala elingasentla kwewotshi kwaye uthintele iscrew sentambo ethe tyaba ekubeni ijike.
(3) Xa ulayisha i-chuck, musa ukuqhuba ukuthintela ingozi.
Indlela yokuphelisa uhambo olungenanto lokucofa
Xa ujika isihlalo, isilayidi esiphakathi, kunye nesiphatho esincinci sesilayidi, ngakumbi xa isiphatho esijikelezayo sijikeleza amatyeli ambalwa, ukuba isiphatho sibuyiselwe umva, ukucofa kufunyanwa kujikeleza, kwaye umniniyo akahambelani. Ukuhamba, oku kungenxa yesikhewu phakathi kwesikrufu esikhokelayo sangaphakathi kunye nenut, ekhokelela kwistroke esingaqondakaliyo.
Ukuba ucofo lujikeleziswa amaxesha ambalwa, kufuneka lubuyiselwe kwelinye icala kwaye ludluliselwe kwinqanaba elifunekayo, njengoko kubonisiwe.